Burcad dad shacab ah dil iyo dhaawacyo ugu geysatay gobolka Shabeellada Dhexe – Hornafrik Media Network
Burcad dad shacab ah dil iyo dhaawacyo ugu geysatay gobolka Shabeellada Dhexe
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya koox burcad ah oo dad shacab ah dil iyo dhaawacyo ugu geysatay duleedka degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Kooxdan oo is baaro ay u taalay deegaanka lagu magacaabo Bashaqle oo dhaca duleedka degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellada Dhexe, ayaa waxa ay rasaas ku fureen gaari rakaab ah oo ay la socdeen ku dhawaad 20 ruux oo shacab ah.
Gaarigaas oo ka baxay Muqdisho ayaa ku sii jeeday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana halkaas ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen dadkii rakaabka ahaa ee la socday gaariga.
Ilo deegaanka ah ayaa noo sheegay in dadka la socday gaariga la rasaaseeyey ay tiro ahaan gaarayeen 18 ruux, kuwaas oo qaarkood ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen, waxaana goobta ku dhintay darawalkii waday gaariga.
Kooxdii geysatay falkaas oo jid gooyo u tiilay deegaanka ayaa goobta ka baxsaday sida ay wararku nagu soo gaarayaan, waxaana iska soo daba dhaceysa cabashada dadka safarka ah ay ka qabaan is-baarooyin aad u badan oo rag ku labisan dariiska dowladda Soomaaliya ay dhigtaan gobollada uu ka arimiyo maamulka Hir-Shabeelle.
Xildhibano shaaciyey in xal laga gaaray khilaafkii waxbarashada ee Puntland iyo dowladda dhexe
Madaxweyne Trump oo u hanjabay dalalka la macaamila shirkadda Huawei